कोरोना संक्रमित बरेङका एक जनाको मृत्यु , थप ४ जनामा संक्रमण पुष्टि | Butwal Dainik
दिपेन्द्र परियार ३१ – बैशाख ०७८ । बरेङ गाँउपालिकाका एक जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको छ ।४ जना थप संक्रमित थपिएका छन ।
बरेङ गाँउपालिका वडा न ३ बाटाकाचौरका अन्दाजि बष ४६ का पुरुषको बुटवलको घागो कारखनास्थित कोभिड अस्थाई अस्पतालमा बुधबार निधन भएको बरेङ गाँउपालिका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख पदम बहादुर पुनले बताउनु भयो ।
बिहिबार गाँउपालिकाका ४ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ ।
वडा न २ का बर्ष ३४ र ३७ का पुरुष र बर्ष ३४ की महिला, तथा वडा न ३ बाटाकाचौरका बर्ष ७८ कि महिलामा संक्रमण पुष्टि भएको कोडिभ अस्पतालका ईन्चार्ज डा. लक्ष्मी पन्थीले जानकारी दिनु भयो । वडा न २ का ४ जनाको कोभिड–१९संग मिल्दो जुल्दो लक्षण देखिएपछि एन्टिजिन परीक्षण गरिएकामा ३ जनामा संक्रमण पुष्टी भएको डा. पन्थीको भनाई छ ।
संक्रमित मध्ये वडा न २ का ३४ वर्षीय पुरुषलाई कोभिड अस्पतालमा राखिएको छ भने ३४ वर्षीया महिला र ३७ वर्षीय पुरुषलाई होम आईशोलेसनमा राखिएको छ ।
वडा न ३ बाटाकाचौरका संक्रमित बर्ष ७८ कि महिला रुपन्देहिको बुटवल स्थित अस्थाई कोभिड अस्पतालमा उपचारारत रहेको स्वास्थ्य शाखा प्रमुख पुनले बताउनुभयो । ति महिलाको स्वास्थ्य अबस्था गम्भीर रहेको वडा न ३ का कार्यबहाक वडा अध्यक्ष दुर्गा कार्की थापा क्षेत्रीले बताउनु भयो ।
कोरोना परीक्षणको लागि वडा न. ४ सल्यानका १५ जना र वडा न. ५ सुखौराका ८ जनाको स्वाब संकलन गरि धौलागिरी अस्पताल बागलुङ पठाउने तयारी गरिएको छ ।
कोरोना संक्रमण समुदाय स्तरमा फैलिएपछि वडा न ३ बाटाकाचौरको नया बजार चिदिखर्क ,घट्टे, मजुवा तथा आसपासका क्षेत्र शिल गरिएको वडा न ३ को कार्यालयले जनाएको छ । गाँउपालिकाले मृतकको सम्पर्कमा रहेका र उच्च जोखिममा रहेका नागरिकको स्वाब परिक्षण गर्ने तयारी गरिरहेको छ ।
बरेङ गाँउपालिकामा समुदाय स्तरमा कोरोना संक्रमण तिब्ररुपमा फैलिदै गर्दा वडान ४ अध्यक्ष लिल बहादुर खत्री भने बिबाह भोजमा सहभागी भएको पाईएको छ ।